'' Lixle Maanta Hala Xuso ''.
Saturday October 17, 2020 - 09:27:09 in Articles by Hadhwanaag News
Eng Maxamed Xaashi Diiriye , wuxuu ahaa muhindiskii hindisey aragtidda ay dib ugu soo noqotay Somaliland , sababtoo ah ;:-
1- 1961 Markii uu fashilmey inqilaabkii saraakishu , iyaddoo askarta Somaliland joogta oo dhami ahaayeen reer Somaliland hadna waxay go'aansadeen in aanay gelin dagaal toosa .
2- 1964 markii ay is casileen wasiiradii reer Somaliland 1964 , reer Somaliland may go'aansan in ay dagaal toosa xaqoda ku raadsadaan .
3- 1981 Markii snm lagaga dhawaaqey London may haysanin cudud ciidan iyo garab milateri .
Eng G/asarre , Maxamed Xaashi Diiriye Lixle 1979 ilaa 82 , wuxuu ka shaqaynayay in uu ka dhaadhiciyo sarakiisha iyo saraakiil xigeenadda ku jirra ciidamadda in ay u dagaalamaan sidii ay usoo dhicin lahaayeen xuquuqda ka maqan dadka reer somaliland .
1982 , Ururkii ugu horeeyey aasaaskii snm oo ahaa guutadii 4aad ee maxamed cali , ninka talaabiyey ee ku qanciyey in ay snm ku biireen oo noqdaan unigii koobaad ee halganku waa Eng Maxamed xaashi lixle , Maxamd cali oo ahaa Taliyihii guutadda 4aad isagga ayaa kasoo daayey xadhig , kuna qanciyey arrintaa aadna ay isugu xidhnaayeen .
Eng Maxamed Xaashi markii uu qawadey hawl-galadii snm , 1-1-1983 wuxuu fuliyey hawl-galkii ugu horeeyey snm ee jebintii jeelka mandheera , kaasoo noqdey shamacii koobaad ee snm aduunyaddu ku baratay .
Eng Maxame xaashi , isago ah xoghayihii Difaaca ee snm wuxuu mar kale hindisey in uu isu geeyo cududii snm , ka dibna hawl-galo ka fuliyo wadanka gudihiisa , isagoo qorshahaa ku guda jirana wuu ku geeriyoodey .
Dhimashadii Lixle , waxay noqotey dhiirigelin iyo carin halgankii snm sii kordhisey , waxaaney sabab u noqotey in dad badan oo kale ku qancaan in sidda Lixle oo kale ay naftooda huraan , taasina waa sirta keentay in aanu halgankii snm bakhtiyin ee uu gaadho ujeedooyinkiisii , ilaa iyo haatana Lixle waa Astaanta geesinimadda iyo adkaysigga .
Lixle maanta maxaynu ku xusnaa .
1- In la sameeyo fagaaraha xoriyadda e Lixle .
2- In la sameeyo Akadamiga Istaraajiyadda iyo siyaasadda ee Lixle .
3- In la sameeyo biladdda abaal marinta lixle oo laggu abaal mariyo qof kasta oo sameeyo fal geesinimo oo wadaniyadeed .
4- In loogu maalinta shuhadada snm ee 17-october lagga dhigo maalinta xuska geesiyadda loona aqoonaddo fasax qaran